admin – Page3– Global News Myanmar
နားအူ နားကိုက် နားပြည်ယို ဝေဒနာရှင်များအတွက်ပျောက်ကင်းသက်သာစေမည့်ဆေးနည်း
နားအူနားကိုက်နားပြည်ယိုဝေဒနာများအတွက်ပျောက်ကင်းသက်သာစေမည့်ဆေးနည်းနားကိုက်လျှင်ရွက်ကျပင် ပေါက်(သို့)ကြောင်လျှာသီးမီးကင်အရည်ညှစ်ခပ်နွေးနွေနားထဲထည့်ပါ။ ညနေကြရင်ဆားခါးကိုလဘက်ခြောက်ဖန်ရည်နဲ့ဖျော်နားထဲထည့်။ဘေးစောင်းပြီးပြန်သွန်ထုတ်၅-ကြိမ်ခန့်ပြုလုပ်ပါ။ နားနှင့်ပတ်သက်သောဆေးမြီးတိုများနားကိုက်လျှင်မုန့်ညင်းဆီကိုကြွေဇွန်းတွင်ထည့်မီးအပူပေးပြီး ခပ်နွေးနွေးလောင်းထည့်ပေးပါ။နားအူလျှင်ရွက်ကျပင်ပေါက်ရွက်ကိုမီးကင်ပြီးညှစ်၍ရသောအရည်ကိုနားအတွင်းသို့ထည့်ပါ။ နားလေးလျှင်ကြောင်ရှာသီးကိုမီးအုံးပြီးအရည်ညှစ်ယူပါ။ထို့နောက်နားအတွင်းသို့တစ်နေ့ ၂-ကြိမ်ထည့်ပေးပါ။ နားပင်လျှင်ကြောင်ရှာသီးကိုပြုတ်ပြီးသံပုရာသီးညှစ်၍ သုတ်စားပါ။နားပြည်ယိုလျှင်ကြိတ်မှန်ရွက်အရည်နှင့်အုန်းဆီရောကာနားကျပ်ပေးပါ။ နားပြည်ယို၍ကိုက်နေလျှင်ငဖြူကြီး(မုရိုးပင်)အရွက်ရင့်ရင့်ကိုထောပတ်သုတ်၍မီးကင်ပြီး အရည်ညှစ်ယူကာ နားအတွင်းသို့ထည့်ပေးပါ။နားလေထွက်လျှင်ကြက်သွန်နီဥအရည်ညှစ်ထည့်ပေးပါ။ နားအူနားလေ ထွက်လျှင် တရုတ်စံကားပွင့်ကိုနားတွင်းပိတ်ဆို့ထားပါ။အပွင့်ကိုပြုတ်ပြီးအသုတ်သုတ်စားပါ။ နားအူနားအုံကိုက်လျှင်သင်္ဘောရွက်ကိုမီးအုံ၍အတို့အမြုပ်လုပ်၍စားပေးပါ။ နားအတွင်းပိုးကောင်ဝင်လျှင်ခရမ်းကစော့သီးကို မီးချို့အခိုးခံပေးပါ။ မုန့်ညင်းဆီဖြင့်နားကျပ်ပေးပါ။ zawgyi နားအူနားကိုက္နားျပည္ယိုေဝဒနာမ်ားအတြက္ေပ်ာက္ကင္းသက္သာေစမည့္ေဆးနည္းနားကိုက္လွ်င္႐ြက္က်ပင္ ေပါက္(သို႔)ေၾကာင္လွ်ာသီးမီးကင္အရည္ညွစ္ခပ္ႏြေးႏြေနားထဲထည့္ပါ။ ညေနၾကရင္ဆားခါးကိုလဘက္ေျခာက္ဖန္ရည္နဲ႕ေဖ်ာ္နားထဲထည့္။ေဘးေစာင္းၿပီးျပန္သြန္ထုတ္၅-ႀကိမ္ခန႔္ျပဳလုပ္ပါ။ နားႏွင့္ပတ္သက္ေသာေဆးၿမီးတိုမ်ားနားကိုက္လွ်င္မုန႔္ညင္းဆီကိုေႂကြဇြန္းတြင္ထည့္မီးအပူေပးၿပီး ခပ္ႏြေးႏြေးေလာင္းထည့္ေပးပါ။နားအူလွ်င္႐ြက္က်ပင္ေပါက္႐ြက္ကိုမီးကင္ၿပီးညွစ္၍ရေသာအရည္ကိုနားအတြင္းသို႔ထည့္ပါ။ နားေလးလွ်င္ေၾကာင္ရွာသီးကိုမီးအုံးၿပီးအရည္ညွစ္ယူပါ။ထို႔ေနာက္နားအတြင္းသို႔တစ္ေန႕ ၂-ႀကိမ္ထည့္ေပးပါ။ နားပင္လွ်င္ေၾကာင္ရွာသီးကိုျပဳတ္ၿပီးသံပုရာသီးညွစ္၍ သုတ္စားပါ။နားျပည္ယိုလွ်င္ႀကိတ္မွန္႐ြက္အရည္ႏွင့္အုန္းဆီေရာကာနားက်ပ္ေပးပါ။ နားျပည္ယို၍ကိုက္ေနလွ်င္ငျဖဴႀကီး(မုရိုးပင္)အ႐ြက္ရင့္ရင့္ကိုေထာပတ္သုတ္၍မီးကင္ၿပီး …
ကောက်ရိုးနွယ်ဆိုတာ လယ်ကွင်းတွေမှာ တွေ့ရတတ်တဲ့ သဘာဝပေါက်ပင်တစ်မျိုးပါ။ ကောက်ရိုးနွယ်ကို တို့မြှုတ်စားသောက်၊ ဟင်းချိုချက်သောက်၊ ကြော်ချက်စားလေ့ ရှိကြပါတယ်။ ခံတွင်းထဲက အဖုအပိန့်ကို ပျောက်ကင်းစေပါတယ်- ကောက်ရိုးနွယ် လက်တစ်ဆုပ်စာကို ရေစင်စင်ဆေးပြီး ရေတစ်ဖလားထည့်။ တစ်ရေကောင်းကောင်း ဆူအောင် ပြုတ်ပြီး ခပ်နွေနွေးမှာ ငုံလိုက်ထွေးလိုက် လုပ်ပေးရင် ခံတွင်းက အဖုအပိန့်တွေ ပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ ဖန်ရည်ဆေးလို့ ရသလို ယားနာကိုလည်း လိမ်းပေးပါ- ကောက်ရိုးနွယ်ပြုတ်ရည်နဲ့ …
လူကြီးတွေ ပြောနေကျ ရာသီလာချိန်မလုပ်ရမယ့် အရာတွေ၊ ရှောင်ကိုရှောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စတွေ မနည်းမနောရှိပါတယ်။ ရှေးလူကြီးတွေရဲ့ အယူအဆတွေဟာ အလုံးစုံမှန်တယ်လို့ ပြောမရရင်တောင် အတော်များများက မှန်နေတတ်လို့ လက်ဆင့်ကမ်းကျင့်သုံးလာကြတာ မဟုတ်လား… ညီမလေးတို့ ရာသီပန်းလေး စပွင့်ပြီဆိုတာနဲ့ ညီမလေးရဲ့ မေမေတို့ ဘွားဘွားတို့က ယောင်းတို့ကို ” သမီး ရာသီလာချိန် ခေါင်းမလျှော်ရဘူးနော်” ” သမီး ရာသီလာချိန် လက်ဖက်မစားရဘူးနော်” …
လိပ်ခေါင်း၊ သွေးဝမ်း၊ နားပြည်ယိုခြင်းများတွက် ဆင်စွယ်ဂမုန်းရဲ့ ထူးခြားတဲ့ အာနိသင်များ
လိပ်ခေါင်း – ဝက်သား ၁၅ကျပ်သားနဲ့ဆင်စွယ်ဂမုန်းတစ်ချောင်းနဲ့ဟင်းချက်စား၊ တစ်နေ့ထဲကုန်အောင်စားလိပ်ခေါင်းရက်အနည်းငယ်သူ့ဖာသာကြွေကျသွား။ အဆိပ်ရှိအင်းဆက်ကိုက်လျင် -ဆင်စွယ်ဂမုန်းကိုရေစင်အောင်ဆေးဆားအနည်းငယ်နဲ့ပျစ်ပျစ်သွေးလိမ်းပေးပါ။ကြောင်ကိုက် ခွေးကိုက် ကြွက်ကိုက်ဒါဏ်ရာများသက်သာစေသည်။ နှလုံးသွေးပှု. သွေးဝမ်း. ဆီးဖြူ – ဆီးနီသက်သာအောင်ဆင်စွယ်ဂမုန်းအပေါ်ခွံခွာ ဟင်းချို (သို့) ချဉ်ရေဟင်းချက်သောက်ပါ။ လိပ်ခေါင်း အတွက် ဟင်းချက်နည်း – ဆင်စွယ်ဂမုန်း ၅ ကျပ်သား မြေပဲဆီ/နှမ်းဆီ ၅ကျပ်သား ကြက်သွန်နီ ၂ ကျပ်သားကြက်သွန်အဖြူ ၂ကျပ်သား …
ထိပ်ခပ်နာရောဂါဟာ လူအများအပြားဖြစ်နေကြတဲ့ ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ထိပ်ခပ်နာဝေဒနာရှင်များမှ ဆေးနည်းများကို စောနွဲ့နေဆိုင်(ပူတာအို)သို့ မကြာခဏတောင်းဆိုလာကြပါတယ်။ ဆရာဝန်ကြီးများကိုယ်တိုင် ရေးသားထားတဲ့ ထိပ်ခပ်နာအကြောင်းများကိုလည်း ညွန်ပေးခဲ့သလို ဆေးရုံးဆေးခန်းများကိုလည်း ညွန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဆေးရုံဆေးခန်းသွားရန် အဆင်မပြေသူများအတွက် သဘာဝဆေးနည်းများဖြင့် ကုသနိုင်ရန် စုစည်းတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဆေးနည်း(၁)နံ့သာဖြူ နှင့် ကင်မွန်းသီးကို ကျောက်ပြင်သန့်သန့်ပေါ်တွင် အဆတူသွေး၍ နှာခေါင်းတွင်းသို့ ဝင်နိုင်သမျှ ဝင်အောင် တစ်ကော်ခန့် ထည့်ပေးပါ။ မကြာခင်ပူလာပါလိမ့်မည်။ နှာချေလာပြီး …
လိပ်ခေါင်းရော အမြစ်ပြတ်စေပြီး အခြားရောဂါအမျိုးမျိုးအတွက် ဆေးဖက်ဝင်တဲ့ ကွမ်းရွက်
ကွမ်းရွက်ကို ကြိတ်၍ဖြစ်စေ ထောင်း၍ဖြစ်စေ ကြေညက်အောင်ပြုလုပ်ပြီးလိပ်ခေါင်းပေါ် အရည်ရောအဖတ်ပါ အုံပေး ကပ်ပေးပါ။ အသက် ၈၀ လူနာ အနှစ် ၆၀ ခန့် စွဲကပ်လာသော လိပ်ခေါင်းရောဂါဤနည်းဖြင့် ၁၅ရက်မျှကပ်ရုံ ပျောက်ကင်းသက်သာသည်။ ဆေးရုံတက်၍ အကြိမ်ကြိမ်ဖြတ်ခဲ့ရသော အနှစ် ၃၀ ခန့် လိပ်ခေါင်းရောဂါခံစားနေရသူလည်း ဤဆေးနည်းအတိုင်း ပြုလုပ်ခဲ့ရာမှအမြစ်ပြတ်ပျောက်ကင်း သက်သာသည်။ ကွမ်းရွက်စွမ်းအင် နှလုံးရောဂါ ပန်းနာ ချောင်းဆိုး …
မျက်ရည်ပူကျ၊မျက်စိမှုံ ၊မျက်စိပူစပ် ၊ မျက်ရိုးကိုက် ၊မျက်စိနာခြင်းတို့အတွက်
မူရင်းနည်းမှာတော့ ဖန်ခါးသီးအခြောက်ပါ ဖန်းခါးသီးအခြောက် မရလျင် အစိမ်းကို ထောင်းပြီး ဆနွင်းမှုန့်အနည်းငယ်ထည့် ရေအနည်းငယ်ထဲ့ပီး ညအိပ်ခါနီး မျက်ခွံမှာ လူးပီးအိပ်။ တပတ်ကို သုံးရက်လောက်လုပ်။လူးပီးတာနဲ့မျက်လုံးကို အေးနေတာပဲ။မျက်လုံး ကိုက်တာ ခဲတာကအစ ပျောက်ပါတယ်။ fb ပေါ်မှာတွေ့လို့ကျနော်စမ်းကြည့် ကြည့်ပီး တကယ်ဟုတ်လို့ မျဝေပေးလိုက်ရပါသည်။ zawgyi မူရင္းနည္းမွာေတာ့ ဖန္ခါးသီးအေျခာက္ပါ ဖန္းခါးသီးအေျခာက္ မရလ်င္ အစိမ္းကို ေထာင္းၿပီး ဆႏြင္းမႈန႔္အနည္းငယ္ထည့္ …
ခါးနဲ့ကျောကုန်း ကိုက်တာတွေကို တစ်ခဏတွင်း ပျောက်ကင်းသက်သာ သွားစေမယ့် နည်းလမ်းများ
ကျောကုန်း ၊ ခါးတွေကိုက်ခဲနာကျင်တတ်တဲ့သူဆိုရင်တော့ ဒီဆောင်းပါးလေးက သင့်အတွက်ပါ။ အထိုင်များလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ လှုပ်ရှားဟန်မမှန်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ခါးတွေ ၊ ကျောတွေ ကိုက်ခဲညောင်းညာနေတတ်ပါတယ်။ ကျောကုန်း နဲ့ ခါးကိုက်တာတွေကို တစ်ခဏချင်းမှာပဲ ပျောက်ကင်းသက်သာသွားစေမယ့် နည်လမ်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် နည်းလမ်း(၁) ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို ဆန့်ကာထိုင်လိုက်ပါ။ ခြေထောက်အောက်မှာ အဝတ်စလေးကို ခုပြီး ခြေထောက်ပေါ်မှာတော့ ခေါင်းအုံးလေးကို ခုထားကာ အဲ့ဒီ့ခေါင်းအုံးလေးပေါ်မှာ မှောက်အိပ်ရမှာပဲ …
အစာအိမ်အချဉ်ပေါက်ခြင်းအကြောင်း သိကောင်းစရာနှင့် ကုသရန်နည်းလမ်းများ
အစာအိမ်အချဉ်ပေါက်ခြင်းဟာ အသက်အရွယ်မရွေး မည်သူမဆို ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရတာဟာ ယေဘုယျအားဖြင့် မိမိစားလိုက်တဲ့ အစားအစာမှ အစာကောင်းစွာမခြေခြင်းကြောင့် အစာအိမ် အူအပေါ်ပိုင်းမှာ နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုပါ။ အစာအိမ်နာခြင်းနှင့် အတွင်းမှ အက်ဆစ်ရည်များ ပြန်ကျစီးခြင်းဟာ အစာအိမ်အချဉ်ပေါက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်လာရတဲ့ အရာတွေပါ။ အစာအိမ်အချဉ်ပေါက်ရတာကတော့ အစာခြေစနစ်ရဲ့ ပြဿနာတွေကြောင့် ဆက်နွယ်ဖြစ်လာရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် တခြားဖြစ်နိုင်တဲ့ အဓိက အကြောင်းအရာတွေကတော့ အစားများခြင်း အပူအစပ်များစားခြင်း၊နေ့လည်စာ …
၁) သွေးလှည့်ပတ်မှု ကောင်းမွန်စေခြင်း သံဓာတ်ပါဝင်မှုများပြားတဲ့အတွက်ကြောင့် သွေးအားနည်းခြင်းအတွက် အိမ်သုံးဆေးတစ်မျိုးအဖြစ် လူသိများပါတယ်။ သံဓာတ်၊ ပရိုတင်း၊ ဗီတာမင်ဓာတ်တွေပါဝင်ပါတယ်။ terpenoids ဆိုတဲ့ဓာတ်တစ်မျိုး ပါဝင်မှုကြောင့် ဓာတ်မတည့်မှုခံစားရခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ၂) ရောင်ရမ်းမှုကို သက်သာစေခြင်း Polysaccharide လို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်တစ်မျိုးပါဝင်ခြင်းက ဆေးဝါးဆိုင်ရာကောင်းကျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ရောင်ရမ်းခြင်းကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အယ်ဇိုင်းမားရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို တားဆီးပေးနိုင်တဲ့အဓိက အင်ဇီုင်းတစ်မျိုးလည်းဖြစ်တဲ့အတွက် အယ်ဇီုင်းမားရောဂါကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ၃) နှလုံးကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းမွန်စေခြင်း ထိုမှိုအမျိုးအစားမှာ …